Thu, Jan 20, 2022 | 04:03:58 NST
​इजरायल पठाइदिने भन्दै ठग्ने गिरी जेल चलान
काठमाडौं, जेठ ६ – इजरायल पठाइदिन्छु भन्दै ठग्ने आरती गिरीलाई प्रहरीले जेल चलान गरेको छ । नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले चार लाख ८५ हजार ठगेर फरार रहेका महोत्तरीका आरती गिरीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरी जेल चलान गरेको हो ।
चितवन जेठ ६ – हात्तीसारका माहुत विनोद चौधरीले त्रित... सिटी बजाए । लक्ष्मण थुचुक्क बस्यो । अर्को सिटीमा सुत्यो, अर्को सिटीमा कोल्टे पर्‍यो ।
सल्यानमा बस दुर्घटना, २० भन्दा बढी घाइते
रुकुम पश्चिम, जेठ ६ – रुकुम पश्चिमको चौरजहारिबाट नेपालगञ्जका लागि छुटेको ना ३ ख ७८७२ नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको छ ।
ताप्लेजुङ, जेठ ६ – स्थानीयवासीको अवरोधका कारण उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माण केही दिनदेखि रोकिएको छ ।
​मन्दिरमा भेटियो शव
भक्तपुर, जेठ ६ – भक्तपुर नगरपालिका–३, मा रहेको मंगलाछेको शिवालय मन्दिर भित्र एक पुरुषको शव भेटिएको छ ।
सुनसरी– सुनसरी इटहरीकी हिरा शाक्यका तीन छोराछोरी निजी स्कुल पढ्छन् ।
रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक आजदेखि खुला
रसुवा, जेठ ६ – चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडक आजदेखि खुला भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज र सहायकको भरमा वडा कार्यालय, आउन मान्दैनन् सचिव
रुकुम पूर्व, जेठ ६ – पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका १४ वडा सचिवविहीन छ । साविकका ६ वटा गाविस मिलेर बनेको यस गाउँपालिकामा एउटा वडामा पनि सचिव छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको सडक उद्घाटन
रसुवा, जेठ ५ – चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने छोटो दूरीको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक उद्घाटन गरिएको छ ।
सप्तरी, जेठ ६ – १२ वर्षदेखि फलामको जन्जिरमा बाँधिएर कष्टकर जीवन बिताउँदै आएकी सप्तरीकी बबिता यादवलाई काठमाडौंको एक संस्थाले उपचारको जिम्मा लिएको छ ।
कुकुरले टोकेपछि खोप नलगाउँदा चारजनाको मृत्यु
काठमाडौं, जेठ ६ – कुकुरले टोकेपछि खोप नलगाउँदा वैशाखमा चारजनाको ज्यान गएको छ । रेबिजका कारण चारजनाको ज्यान गएको हो ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडककाे पहिरो हटाइयाे, दुवैतर्फ गाडी गुड्न थाले
काठमाडौं, जेठ ६ – नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बिहान खसेको पहिरो हटाइएको छ । बिहान ५ बजेतिर खसेको पहिरो केहीबेर अघि हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
​करेण्ट लागेर दुई युवतीको ज्यान गयो
विद्युत मिटर ल्याइदिने भन्दै रकम लिएर युवा फरार
इलाम, जेठ ५ – गाउँमा विद्युत मिटर ल्याएर जडान गरिदिने भन्दै घरधुरी रकम संकलन गरेर एक युवा फरार भएका छन् ।
पन्यूले हिर्काएर श्रीमतीको हत्या
सिन्धुली, जेठ ५ – सिन्धुलीको ध्याङलेक गाँउपालिका वडा नम्बर–३, लप्से निवासी ४५ वर्षका एकिम गोलेले श्रीमतीको हत्या गरेका छन् ।
​बलात्कार अभियोगमा एक युवा पक्राउ
पाँचथर, जेठ ५ – १५ वर्षकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पाँचथर प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ ।
​मिटर किनेको तीन महिना भयो प्राधिकरण तार जोड्न मान्दैन
काठमाडौं, जेठ ५ – फोटो पत्रकार पुर्णिमा श्रेष्ठले सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं, जेठ ५ – कार्बाइड प्रयोग गरी पकाइएका आँप, लिचीलगायतका फलफूल नखान डाक्टरहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन यातायात समितिलाई तीन दिनको समयसीमा
ओखलढुंगा, जेठ ५– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ओखलढुंगामा दर्ता भएर सञ्चालन भएका यातायात समितिहरुलाई तीन दिनभित्र चल अचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिकिदिममा भाइरल फिभरको महामारी
तेह्रथुम, जेठ ५ – मेन्छ्यायेम गाउँपालिका–६, मोराहाङको सिकिदिममा भाइरल फिभरको महामारी फैलिएको छ ।
​विराटनगरका महंगा होटलमा सुनकाण्ड अभियुक्तका आफन्त, एसीजडित होटल खोज्दै बस्दै
भक्तपुर, जेठ ५ – गएको वैशाख ३१ गते एक युवतीलाई करणी गरेको अभियागमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ओखलढुंगा, जेठ ५ – पढाइलाई उमेरले छेक्दैन भन्ने सन्देश ओखलढुंगाकोे सुनकोशी गाउँपालिका ८ की ३१ वर्षीया हेमकुमारी बस्नेतले दिनुभएको छ ।
कपिलवस्तु जेठ ४ – शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नं. ६ वडा कार्यालयका सहायक सचिव वडरी यादवमाथि हातपात गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
रामेछाप ४ जेठ – रामेछाप जिल्ला लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको झट्टेश्वर माविका प्रधानाध्यापक केवल तिमल्सेनाले आफ्नै विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुकै पिसाब खान बाध्य वनाएका छन् ।
​नवलपरासीमा वैदेशिक रोजगारीमा नाममा ठगि बढ्यो, ठग्ने आफन्त र चिनजानकै व्यक्ति
नवलपरासी, जेठ ४ – पश्चिम नवलपरासीमा वैदेशिक रोजगारी नाममा ठगिनेहरु बढेका छन् । पछिल्लो ४ वर्षमा ठगिएकाहरुले दिएको उजुरीले ठगिनेहरु बढेको देखाएको हो ।
स्वास्थ्य परीक्षणका कारण मलेसियाको रोजगारी प्रभावित
काठमाडौं, जेठ ४ – मेडिकल व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रोकेपछि मलेसिया जाने कामदार मर्कामा परेका छन् ।
बाबुको हत्यारा १० वर्षपछि पक्राउ
अर्घाखाँची, जेठ ४ – आफ्नै बाबुको हत्या गरी फरार रहेका एक जनालाइ १० वर्ष छि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सिन्डिकेट हटाउने महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रीले किन हटाए ?
काठमाडौं, जेठ ४ – भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा तान्नुभएको छ ।
विदेश गएका आफन्तका बारेमा जानकारी राख्नुभएको छ ?
जेठ ४ – भगवती नेपालीका दुई जना छोरा विदेश गएका छन् । साइँलो र कान्छो छोरा साउदी अरब गएको थाहा छ उहाँलाई । तर साउदीको कुन ठाउँमा छन् अनि के काम गर्छन भन्ने चाहिँ थाहा छैन ।
डडेल्धुरा, जेठ ४ – परशुराम नगरपालिका–२ मा रहेको भागेश्वर माध्यमिक विद्यालय बसौटीमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई निर्घात कुटपीट गरेका छन् ।